AdButler: WordPress Isdhaxgalka Xayeysiinta U adeegida. Martech Zone
Arbaco, Juun 5, 2017 Sabtida, Juun 8, 2017 Douglas Karr
Haddii aad heshay degel WordPress ah oo aad rabto inaad ku maamusho xayeysiinta xayeysiistayaashaada, AdButler waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu fiican suuqa. Isku-darka WordPress ee loo adeegsado widget-yada wuxuu ka dhigayaa dhismaha iyo geynta aagagga xayeysiiska qayb keeg ah, iyo nidaamka AdButler waa mid aad loo habeyn karo, dabacsan yahay, la qiyaasi karo, oo xitaa wuxuu bixiyaa whitelabeling.
Astaamaha Platform AdButler Waxaa ka mid ah:
Heerarka - Miisaan lagu kalsoonaan karo oo dammaanad qaad ah markii dalabku sii kordho, laga bilaabo boqollaal illaa balaayiin aragtiyo ah.
Tartanka Madaxa - Xaraashyada AdButler waxay awood u siinayaan madbacadaha inay ku dhex daraan iibka tooska ah lamaanayaal badan oo madax ka ah qandaraasyo si loo kordhiyo dakhliga.
Taageerada Xayeysiiska Warbaahinta - U adeegso dhammaan hal-abuurka, oo ay ku jiraan HTML5, fiidiyoow, flash, sawirro, emayl, moobiil iyo wicitaanno isku mid ah.
Fiidiyowga Xayeysiinta ah (VAST) - AdButler's fudeydkiisa uu adeegsado moduleka u hoggaansamaya VAST 2.0 wuxuu kuu badbaadin doonaa waqti iyo qalbi xanuun.
Warbixinno Dhakhso ah - Helitaanka degdegga ah ee warbixinnada firfircoon, waqtiga dhabta ah.
Waxaan u qaatay AdButler tijaabinta tijaabada runtiina aad baan ula dhacay sida wanaagsan ee nidaamka loo dhisay. Haddii aysan ahayn hal muuqaal oo maqan, waxaan si buuxda ugu fulin lahaa goobta… iskaa wax u qabso. Waxaan jeclaan lahaa in boggu yeesho bog uruurin furan iyo awoodda xayeysiistayaasha inay naftooda ugu adeegaan. Intaa waxaa sii dheer, isdhexgalka albaabka lacag bixinta ee aruurinta dakhliga xayeysiinta ayaa fiicnaan laheyd.
Haddii aad maareynaysid boggagaaga iyo xayeysiistayaasha, in kastoo, AdButler waa madal horumarsan qaab-hodan ah.
Kala-doorashada AdButler Ad Adeegyada Ku-dar
Gawaarida - AdButler wuxuu isu dheelitirayaa gaarsiinta ololahaaga waqti ka dib xitaa u qaybinta dareenka.
Xiritaanka Joogtada - Xaddid tirada jeer ee xayeysiintu tusayso isticmaale gaar ah.
Kala tag Maalinta - Beegso xayeysiis ku saleysan waqtiga maalinta.
Beegsiga Juqraafiyeed - Bartilmaameedka xayeysiinta dal, gobol ama gobol, ama xitaa sida gaarka ah ee magaalada.
Bartilmaameedka Madal - Beegso oo adeegso xayeysiiska iyadoo ku xiran hadba aaladda isticmaaleyaasha ay booqanayaan.
Bartilmaameedka Keyword - Bartilmaameedka ololeyaasha xayeysiinta adoo adeegsanaya ereyada muhiimka ah oo ay kujiraan cayaaraha.
Xisaabaad Isticmaalayaal Badan - Abuur akoonno badan oo isticmaale ahaan ah sida loogu baahan yahay si loogu maareeyo loona adeego tirakoobka.
Kanaalada Xayeysiinta - Ku xayeysiiso xayeysiis la mid ah ilaha ilaha xayeysiiska hal kanaal fudud oo loo adeegsan karo.
Caawinaad waxtar leh - Kooxda taageerada AdButler waxaa laga heli karaa taleefan ama emayl.
Sida loo rakibo loona qaabeeyo AdButler WordPress
Ku rakib qalab, geli fure, iyo boggaaga WordPress wuxuu si buuxda ugu dhex jiraa AdButler! Halkan waxaa ah fiidiyowyo dhowr ah oo kugu socda habka:
Tags: server adxayeysiiska u adeegaadbutlerkanaalada xayeysiintajuquraafi ahaan loogu talagalay serverka adkeyword bartilmaameedka ad serverboosteejo lagu bartilmaameedsaday serverka adWordPresswordpress ad adeegaya